Le migaqo nemiqathango ("iMigqaliselo", "isiVumelwano") sisivumelwano phakathi koMsebenzi weWebhusayithi ("uMsebenzi weWebhusayithi", "thina", "thina" okanye "wethu") nawe ("Umsebenzisi", "wena" okanye "wakho "). Esi siVumelwano sibeka imigaqo kunye neemeko zokusebenzisa kwakho iwebhusayithi avalanches.com kunye nayo nayiphi na imveliso okanye iinkonzo zayo (ngokudibeneyo, "iWebhusayithi" okanye "iiNkonzo").
Iiakhawunti kunye nobulungu
Kuya kufuneka ubuncinci ube neminyaka eli-13 ubudala ukuze usebenzise le Webhusayithi. Ngokusebenzisa le Webhusayithi kwaye uvumelane nesi siVumelwano uyaqinisekisa kwaye umele ukuba ubuneminyaka eli-13 ubuncinci. Ukuba wenza iakhawunti kwiWebhusayithi, unoxanduva lokugcina ukhuseleko lweakhawunti yakho kwaye uxanduva lwakho ngokupheleleyo kuyo yonke imisebenzi eyenzeka phantsi kweakhawunti kunye naziphi na ezinye izinto ezenziweyo ngokunxulumene nayo. Ukubonelela ngeenkcukacha zonxibelelwano ezingalunganga zalo naluphi na uhlobo kunokubangela ukupheliswa kweakhawunti yakho. Kuya kufuneka usazise kwangoko nangaluphi na usetyenziso lweakhawunti yakho olungagunyaziswanga okanye naluphi na ulwaphulo-mthetho. Asizukubekwa tyala ngayo nayiphi na into oyenzileyo okanye into oyenzileyo, kubandakanya nawuphi na umonakalo owenzekileyo ngenxa yezenzo okanye ukushiywa. Singayinqumamisa, siyikhubaze, okanye siyicime iakhawunti yakho (okanye nayiphi na inxalenye yayo) ukuba sifumanisa ukuba wophule naliphi na ilungelo lesi siVumelwano okanye ukuba indlela oziphethe ngayo okanye umxholo wakho ungonakalisa igama lethu kunye nomnqweno wethu. Ukuba siyayicima iakhawunti yakho ngenxa yezi zizathu zingasentla, awungekhe uphinde ubhalise kwiiNkonzo zethu. Singayivimba idilesi yemeyile kunye nedilesi yomgaqo-nkqubo we-Intanethi ukunqanda ukubhaliswa kwakhona.
Asinayo nayiphi na idatha, ulwazi okanye izinto ("Isiqulatho") osifaka kwiWebhusayithi xa usebenzisa iNkonzo. Uya kuba noxanduva lokuchaneka, umgangatho, ukuthembeka, ukuba semthethweni, ukuthembeka, ukufaneleka, kunye nobunini bepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda okanye ilungelo lokusebenzisa konke okuThunyelweyo Sinako, kodwa asinasibophelelo sokujonga umxholo kwiWebhusayithi ethunyelweyo okanye eyenziweyo kusetyenziswa iiNkonzo zethu. Ngaphandle kokuba uvunyelwe ngokukodwa nguwe, ukusebenzisa kwakho iWebhusayithi akuniki imvume yokusebenzisa, ukuvelisa ngokutsha, ukulungelelanisa, ukuguqula, ukupapasha okanye ukuhambisa umxholo owenziwe nguwe okanye ogcinwe kwiakhawunti yakho yomsebenzisi kwezorhwebo, ukuthengisa okanye nayiphi na injongo efanayo. Kodwa usinika imvume yokufikelela, ukukopa, ukuhambisa, ukugcina, ukuhambisa, ukulungisa kwakhona, ukubonisa nokwenza umxholo weakhawunti yakho yomsebenzisi njengoko kufuneka ngenjongo yokubonelela ngeenkonzo kuwe. Ngaphandle kokuthintela nakuphi na kokumelwa okanye iiwaranti, sinelungelo, nangona ingesosibophelelo, ukuba, ngokokubona kwethu, ukwala okanye ukususa nasiphi na isiqulatho, ngokoluvo lwethu olusengqiqweni, esaphula nayiphi na imigaqo-nkqubo yethu okanye nangayiphi na indlela iyingozi okanye ephikisayo.
Asinaxanduva loMxholo ohlala kwiWebhusayithi. Akukho mcimbi siya kuba netyala lokulahleka kwayo nayiphi na into. Luxanduva lwakho kuphela ukugcina ugcino olufanelekileyo loMxholo wakho. Ngaphandle koku kuchazwe ngasentla, ngamanye amaxesha nakwiimeko ezithile, ngaphandle kokuzibophelela, sinokukwazi ukubuyisela enye okanye yonke idatha esusiweyo ngomhla kunye nexesha elithile esinokuthi silondoloze idatha yethu Iinjongo. Asiqinisekisi ukuba idatha oyifunayo iya kubakho.
Sinelungelo lokusiguqula esi siVumelwano okanye imigaqo-nkqubo yaso enxulumene neWebhusayithi okanye iiNkonzo nangaliphi na ixesha, ngokufanelekileyo xa sithumela ingxelo ehlaziyiweyo yesi siVumelwano kwiWebhusayithi. Xa sisenza njalo, siza kuthumela isaziso kwiphepha eliphambili leWebhusayithi yethu. Ukusetyenziswa okuqhubekekayo kweWebhusayithi emva kotshintsho olunjalo kuya kwenza imvume yakho kolu tshintsho.
Ukwamkelwa kwale migaqo
Uyavuma ukuba usifundile esi siVumelwano kwaye uyavumelana nayo yonke imimiselo nemiqathango yaso. Ngokusebenzisa iWebhusayithi okanye iiNkonzo zayo uyavuma ukuba ubotshelelwe sesi siVumelwano. Ukuba akuvumi ukuthobela imiqathango yesi siVumelwano, awugunyaziswanga ukuba usebenzise okanye ungene kwiWebhusayithi nakwiinkonzo zayo.
Ukuba unemibuzo malunga nesi siVumelwano, nceda unxibelelane nathi.
Olu xwebhu lagqityelwa ukuhlaziywa ngo-Epreli 12, 2019